Nayakhabar.com: डिभी चिट्ठा असोज १८ गतेबाट खुल्ने, कसरी भर्ने अनलाइन फारम ?
डिभी चिट्ठा असोज १८ गतेबाट खुल्ने, कसरी भर्ने अनलाइन फारम ?
काठमाडौं । सन् २०१८ को अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) असोज १८ गते मंगलबारदेखि आवेदन खुल्ने भएको छ । अमेरिकी दूतावासले बुधबार सूचना जारी गर्दै आगामी १८ राती ९ :४५ बजेबाट आवेदन दर्ता सुरु हुने जनाएको छ ।
डिभी चिट्ठाका लागि कात्तिक २२ गते रातको पौने एघारसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। करिब एक महिनाको अवधि दिएर सार्वजनिक गरिएको डीभी चिट्ठा भर्न कुनै शुल्क नलाग्ने दूतावासले जनाएको छ । यसको नतिजा सन् २०१७ मे २ ९२०७४ वैशाख १९० मा सार्वजनिक हुने पनि दूतावासले जनाएको छ।
सन् २०१८ को डाइभर्सिटी भिसा चिट्ठाका लागि आवेदकहरूले दर्ता अवधिमा www.dvlottery.state.gov आवेदन फारम भर्नु पर्नेछ ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार, डिभी फारम दर्ता गर्दा आफ्ना पति–पत्नी र आवेदनको समयमा २१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानलाई सूचित गर्नु अनिवार्य छ ।